September 23, 2013 – democracy for burma
MYANMAR BURMA NLD : A federalist constitution can build trust for peace-making
On September 23, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
EMG A constitution that guarantees federalism is one that can build trust for peace among ethnic groups, according to the opposition National League for Democracy (NLD).
Nan Khin Htwe Myint,amember of the NLD’s chief executive committee, read the statement during the Trust-Building for Peace seminar held in Taunggyi, Shan state on Sunday.
“There need to be favourable conditions to establishagenuine Union, which the ethnic groups long for. Especially if provisions are guaranteed to establishagenuine Union, the ethnic groups will unconditionally trust the government. At present, the issue of whether to amend the current constitution or draw upanew constitution is under discussion. To enact federalism in the constitution is more important to trust-building for peace,” the statement said.
The statement called for additional peace talks, which Myanmar citizens expect, and the enactment ofafederal principle in the constitution, which ethnic groups have requested.
If the 2008 Constitution is not amended, sustainable peace cannot be restored, the statement said. The NLD is gathering opinions of the ethnic parties to amend the constitution, and its findings will be shared with the public.
The Constitutional Amendment Committee, founded by the NLD, holds weekly discussions with ethnic representatives. NLD chairperson Aung San Suu Kyi is leading the party’s outreach with the ethnic groups.
U WIRA THU :Lu Gyi သို့ ဒုတိယပြန်ကြားလွှာ ဒိုင်းမွန်းရွှေကြည်။
On September 23, 2013 September 23, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Lu Gyi သို့ ဒုတိယပြန်ကြားလွှာ
ဒိုင်းမွန်းရွှေကြည် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကြိုးပမ်းခြင်းကို အဆွေတော်နားလည်မှုပေးခြင်းကို လေးစားစွာဖြင့် ကြိုဆိုပါသည်။ ဗြိတိသျှကိုလိုနီ၏ ပယောဂကြောင့် မြန်မာမြေတွင် နိုင်ငံသံခြားသားများစွာ ဝင်ရောက်ခဲ့ရခြင်း သမိုင်းဆိုးရှိခဲ့ပါသည်။ လွတ်လပ်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ဆရားကြီး ဦးရာဇာတ် သံအမတ်ကြီး ဦးဖေခင်တို့သည် အနာဂါတ်မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွေးဖွားလာမည့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအတွက် ပဋိညာဉ်ရှိကြောင်း အထောက်အထားနှင့်တကွ မှတ်တမ်းရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော ရိုဟင်ဂျာအရေးကို ကျွမ်းကျင်သော သမိုင်းပညာရှင်များနှင့် နိုင်ငံတော်မှ ကြိုးစားဖြေရှင်းနေပါသည်။ အဆွေတော်၏ မေးခွန်းများကို ဖြေကြားပါမည်။ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အမိမြေမှာ မွေးဖွားသောနိုင်ငံသားတိုင်း သစ္စာရှိရပါမည်။ မိန်းမတစ်ယောက်သည် ကုလားနှင့်ကလေးရမည်။ ဗမာနှင့်ကလေးရမည်၊ အင်္ဂလိပ်နှင့် ကလေးရမည်၊ တရုတ်နှင့်ကလေးရမည်။ ၄င်းမိခင်သည် ကိုးလလွယ် ဆယ်လဖွား၊ ရင်သွေးအားလုံးကို တန်းတူ ချစ်သည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ သို့ပါ၍ အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် မွေးဖွားသူတိုင်း၊ ဒါတို့ပြေ၊ ဒါတို့မြေ၊ ဒါတို့အမိနိုင်ငံတော် ချစ်မြတ်နိုးရပါမည်။ သစ္စာရှိရပါမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ကျွန်တော်သည် လူမှန်းစသိကတည်းက မြန်မာပြည်သည် တို့ပြည်၊ မြန်မာစာသည် တို့စာ မြန်မာစကားသည် ဒို့စကား မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေး မှုဓလေ့စရိုက်လက္ခဏာများနှင့် ယဉ်ပါးကြီးပြင်းခဲ့သူ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဖြစ်ပြီး၊ အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အလံတော်ကို ရိုသေစွာ အလေးပြုလာသူ ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်သည် တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း စစ်ဖြစ်နေခဲ့သောကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ကင်းကွာနေပါသည်။ ရခိုင်နှင့် ဘင်္ဂါလီပြဿနာ သာဓက ရှမ်း၊ ကချင်၊ မွန်၊ ကရင် ပြဿနာများအားလုံး နိုင်ငံတော်အတွင်း မွေးဖွားသူနိုင်ငံသားအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်ပါ သည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူလက်တွဲ ဖြေရှင်းအဖြေရှာခြင်းသာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါ၍ အစိုးရ ပြည်သူ ရဟန်းသံဃာ မီဒီယာနှင့် ဘာသာပေါင်းစုံမှ ထေရ်ကြီးဝါကြီးများ စုပေါင်းဖြေရှင်းအဖြေရှာရန် ကြိုးစားသင့်ပါ သည်။ ကျွန်တော်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ချစ်ကြည်ရေးသံတမန် ကွန်ယက်သည် ၄င်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ဆရာတော် ဦးဝီရသူနှင့် လက်တွဲ၍ အုပ်တစ်ချပ်သဲတစ်ပွင့်အဖြစ် ကြိုးပမ်းနေပါသည်။ အဆွေတော်မှ အကြံဥာဏ်များ ပါဝင်ပေးပါရန် လေးစားစွာ ပြန်ကြားအပ်ပါသည်။ အချို့ အကြောင်းအရာများသည် အငြင်းပွား မှု ကြာရှည်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အမုန်းတရားများဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အမုန်းပင်များအစား ငြိမ်းချမ်းရေးသစ်ပင် စိုက်၍ ငြိမ်းချမ်းရေး အရိပ်ကို တမ်းတမိ၍ တက်နိုင်သည့်ဘက်မှ ကြိုးပမ်းနေပါသည်။ မှားယွင်းမှုများ အစဉ်မပြေမှုများ ရှိခဲ့ပါက အထောက်ပြဝေဖန်ပြီး လမ်းညွှန်မှုပေးပါရန် လေးစားစွာဖြင့် အဆွေတော်သို့ ပြန်ကြား အပ်ပါသည်။ Continue reading “U WIRA THU :Lu Gyi သို့ ဒုတိယပြန်ကြားလွှာ ဒိုင်းမွန်းရွှေကြည်။” →
U WIRA THU : “ဦးအောင်တင် NLD သို့ ပြန်ကြားစာ”
“ဦးအောင်တင် NLD သို့ ပြန်ကြားစာ”
စက်တင်ဘာ (၂၁)ရက် ရက်စွဲဖြင့် ပေးပို့လာသော မေးလ်စာလေးပါ။ ပေးပို့သူက ဦးအောင်တင်ပါ။ ဦးအောင်တင်တို့ရဲ့ ခံစားချက်ကို သိခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ကိုအောင်တင်ရဲ့သဘောထားကလည်း ရှင်းပါတယ်။ နိုင်ငံသား၊ တိုင်းရင်းသားတန်းတူညီမျှရေး- ဒါတွေပဲမဟုတ်လား?။
ဦးပဉ္စင်းရဲ့သဘောထားကိုလည်း အတိအလင်း ပြောပြလိုက်ပါတယ်။
၁- ဒုက္ခသည်အမည်ခံချင်ရင် သနားအောင်နေပါ။
(ဒုက္ခသည်အမည်ခံထားပြီး အမြဲတန်းရန်လိုနေက မည်သူမျှ သနားလိမ့်မည် မဟုတ်)
၂- နိုင်ငံသားဖြစ်ချင်ရင် သဒ္ဓါအောင်နေပါ။
(နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး ပေးချင်စိတ်ပေါ်လာစေရန် သဒ္ဓါ- ကြည်ညိုအောင်နေထိုင်ဖို့လိုသည်။)
၃- တိုင်းရင်းသားဖြစ်ချင်ရင် ချစ်ခင်အောင်နေပါ။
(ညီရင်းအစ်ကိုလို လူတိုင်းအပေါ်ချစ်ခင်တတ်ပြီး နိုင်ငံတော်အလံနှင့် တရားဥပဒေကို ရိုသေလေးစားဖို့၊ တိုင်းရင်းသားတွေကို ပစ်မှတ်ထား မတိုက်ခိုက်ဖို့လိုသည်)
၄- လူအခွင့်အရေးလိုချင်ရင် လူစိတ်မွေးပါ။
(လူ့အခွင့်အရေးကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လေးစားလိုက်နာတဲ့အနေနဲ့ လူသားချင်းစာနာစိတ်မွေးဖို့ လိုသည်။)
၅- တန်းတူညီမျှ နေထိုင်ချင်ရင် မေတ္တာထားပါ။
(မိမိကိုတိုင် သစိမ်း (သူစိမ်း)ကို သားအရင်းလိုမေတ္တာထားနိုင်အောင် အရင်ကြိုးစားဖို့ လိုသည်။)
၂၂-၉-၂၀၁၃၊ ၈း၅၂ (PM)
Bcc: wirathu2012@gmail.com Sat, Sep 21, 2013 at 9:48 AM
ခုတလော တိုင်းရင်းသားလူမျိုး (၁၃၅)မျိုးဆိုပြီး ဝန်ကြီးဦးခင်ရီခမျာ ထပ်တလဲလဲ ပြောနေလိုက်ရတာ တတွေး(တံတွေး)တောင် သီးလောက်ပေပြီ။ မကြာသေးခင်က တိုင်းရင်းသားလူမျိုး (၁၀၁)မျိုးဆိုပြီး သူဘဲ အခုလို ထပ်တလဲလဲ မြည်ခဲ့တာကို မေ့သွားရှာပြီနဲ့ တူပါတယ်။ မှတ်ညာဏ်က တိုသကိုး။
ဒီတော့ တိုင်းရင်းသား (၁၃၅)မျိုး ဘယ်ကရသလဲ ဆိုတာကို ဆန်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ စစ်အစိုးရတွေက တိုင်းရင်းသားတွေ ဘယ်လို ပြန့်နှံ့နေထိုင် ဝတ်စားကြတယ်၊ အသက်မွေးကြတယ်။ ဘယ်လို ယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ ဓလေ့တွေ ရှိကြတယ်။ ဘာကြောင့် တိုင်းရင်းသား (၁၃၅)မျိုးဆိုတဲ့ အရေအတွက်ကို ရခဲ့တယ်ဆိုပြီး တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထုကို တင်ပြတာမျိုး၊ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်တာမျိုး၊ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့ဘူး။ ဒါ့အပြင် ဘာကြောင့် ၁၃၅ဆိုတဲ့ ဂဏန်းကိုမှ ရွေးခဲ့တာလဲ ဆိုတာက မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်တယ်။ Continue reading “U WIRA THU : “ဦးအောင်တင် NLD သို့ ပြန်ကြားစာ”” →
THAILAND : NO DAM “Mae Wong” PROTESTERS REACH BANGKOK PHOTOS
BANGKOK, 22 September 2013 (NNT) – Protesters against the Environmental Health Impact Assessment (EHIA) of the controversial “Mae Wong” dam on Sunday reached their final destination in Bangkok after they started walking from the Mae Wong National Park in Nakhon Sawan province on 10 September 2013.Secretary General of the Seub Nakhasathien Foundation Sasin Chalermlarp, who leads the protest, said the walking protest campaign was aimed at creating awareness among the public. The protesters believed the dam was notasolution to flooding and it would damage more than 13,000 Rai of forest land, Mr Sasin said.
The foundation’s secretary general added that he was not concerned about the government’s affirmation to move on with the Mae Wong project, saying he believed in the power of people who agreed with him. Mr Sasin also expressed his confidence the protest would eventually lead to the cancellation of the dam construction.
Mae Wong National Park comprises nearly 900 square kilometers or about 558,750 rai of pristine forest land in Nakhon Sawan. If the 13-billion-baht dam is constructed, about 2% or 13,260 rai of fertile forest will be flooded.
PHOTO CREDIT facebookMarkfanclub
NEW: OFFICAL WEBSITE OF KAREN NATIONAL UNION -KNU ENGLISH
Myanmar: တကယ်ကျေးဇူးတင်ရမှာ ပထမ က ဒီတအောင်းပလောင် လူမျိုး လမ်းလုပ်သား လူငယ်လေးပါ သူ့ ရဲ့အကူအညီက အများကြီးပါ
On September 23, 2013 September 24, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
source MAUNG MAUNG Oo
တကယ်ကျေးဇူးတင်ရမှာ ပထမ က ဒီတအောင်းပလောင် လူမျိုး လမ်းလုပ်သား လူငယ်လေးပါ သူ့ ရဲ့အကူအညီက အများကြီးပါ
အပင်ကြီး ကြီးမားမာသိပ်မရှိဘဲ လ္ဘက်ပင်ငယ်တွေကြားက
တောင်အောက်ကို ပြေးပြေး ပြီးဆင်းသွားလိုက်တာ အံ့သြမဆုံးဘူးဗျာ
ကျွန်တော်တို့ က ဝိုင်းကူပြီး ဆေးဝါးတချို့အသင့်ပြင်ထားသော်လည်း
သွေးတချို့သွန်သလို ဖြစ်နေပြီး ခါးနာနေတာကြောင့်
နမ့်ဆန် ဆေးရုံဘဲအမြန်ပို့ ပေးကြရပါတယ်
စိမ်းရောင်စိုတို့လူ့ အသက် ၂ချောင်း ခရီးသွားဟန်လွဲကယ်ခွင့်ရ ရှိ ခဲ့ 
စိမ်းရောင်စို Act; နမ့်ဆန် မြို့ငြိမ်းချမ်းမှစိမ်းလန်းမည် ပွဲအကြောင်းမပြောခင်
လူ၂ယောက်အသက်(ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် ) ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ကယ်ဆယ်ခဲ့ကြရပါသည်ီ
ပေ၅၀၀၀ ကျော်မြင့်သော တောင်ပေါ်မှ အဆင်းလမ်းတွင် ထော်လာဂျီ ယဉ်တစီး နမ့်ဆန်မြို့ အနီး ၉မိုင်ခန့် အကွာ မိုင်တိုင်၃၉ တွင် ဂျောက်ထဲသို့ ပြုတ်ကျသွားခဲ့ရာ ယဉ်မောင်းကိုထွန်းနိင် နှင့် စပါယ်ယာ တို့ မှာ လမ်းအနီးအပေါ်ပုိင်းတွင်ပြုတ်ကျကျန်ခဲ့ပြီး လမ်းကြုံလိုက်ခရီးသည် စခန်းသာရွာနေ မအေးမိုး ကိုယ်ဝန် ၈လ လွယ်ထားရသော တအောင်းတိုင်းရင်းသူ သည် ကားနှင့်အတှု ကျ သွားပြီးး ပေ၂၀၀ ခန့် တွင် အပငါနှင့်ငြိကျန်နေပြီး ထွေလာဂျီမှာ အောက်ဖက်ရှိ ဂျောက်အနက်ထဲ ဆက်ကျသွားခဲ့ပါသည်
နံက်၉ာရီခန့် တွင်ယင်းကိစ္စကဖြစ်အပြီးနာရီဝက်ခန့် အကြာ မိမိတို့ အဖွဲ့ အပြန် ခရီးနှင့်ကြုံကြိုက်ရာ ဂျောက်အတွငိးသို့ ဒေသခံ လူငယ်တဦးအကူအညီနှင့်ဆင်းစုံစမ်းပီး အသက်ရှင်နေသေးသညိ့အတွက် Continue reading “Myanmar: တကယ်ကျေးဇူးတင်ရမှာ ပထမ က ဒီတအောင်းပလောင် လူမျိုး လမ်းလုပ်သား လူငယ်လေးပါ သူ့ ရဲ့အကူအညီက အများကြီးပါ” →
KIA’s 8th Battalion troops and allied TNLA troops asajoint force fought againstacombined force of about 100 soldiers from Burmese army’s 45th LIR and 145th LIR, Kawng Hka Pyi Thu Tsit (former KDA), Kut Kai Pyi Thu Tsit under U T. Hkun Myat, and Pan Se Pyi Thu Tsit under U Kyaw Myint at Nam Pang in northern Shan State on September 17 at 11:30 am. A KLN source says5soldiers from government’s side died and no casualties on KIA/TNLA side in this battle.
Both U T. Hkun Myat and U Kyaw Myint (also known as U Win Maung or Li Yongqiang) are Burmese government’s parliamentarians. KIA troops fought militia led by another parliamentarian U Zahkung Ting Ying in eastern Kachin State last month. Burmese army is increasingly using ethnic militias in its fight against ethnic armies.
Thaksin bumps into Suu Kyi at the 2013 Formula 1 Singapore Grand Prix.တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါလား ကိုသက်ဆင်ရယ်
ဖော်မြူလာဝမ်းကို သွားလည်ရင်း သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အမှတ်မထင်ဆုံမိတယ်လို့ တရားခံပြေးဖြစ်နေတဲ့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်က သတင်းထုတ်ပြန်တယ်။
တမင်ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ပဲ အမှတ်မထင်ဆုံဖြစ်တာပါလို့ သူက ဆိုပေမဲ့ စင်္ကာပူအစိုးရဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အလွယ်တကူ အခုလိုဝင်ရောက်နုတ်ဆက် စကားပြောနေတဲ့ ပုံက သူမတော်တဆကြီးက ရိုးမှရိုးရဲ့လား စနစ်တကျ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ မတော်တဆမျိုးကြီးလားလို့ တွေးစရာပါ။
သူဝန်ကြီးချုပ်ဘ၀က မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ အလွန်နီးကပ်ခဲ့တဲ့ သက်ဆင်ဟာ အဲဒီတုန်းက မြန်မာနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းမှာ အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဂျမ်းတုံးကြီးတုံးပဲ လို့ဝေဘန်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပြီး တလောက အင်တာနက်ပေါ်ပျံ့နှံ့ခဲ့ သူနဲ့ လက်ရှိထိုင်းအစိုးရ ထိပ်တန်းအရာရှိကြီးတစ်ဦး ဟောင်ကောင်မှာ စကားလက်ဆုံကြခဲ့စဉ် အသံဖိုင်လို့ ယူဆရတဲ့ အသံဖိုင်ထဲမှာ ထိုင်းတွေအနေနဲ့ မြန်မာပြည်အပေါ်မှာ ဆက်လက်သြဇာလွှမ်းမိုးထားဖို့နဲ့ လက်ရှိအာဏာ
အရှိဆုံးဖြစ်တဲ့ တပ်ချုပ်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကို အပိုင်ထိန်းထားဖို့
Former prime minister Thaksin Shinawatra posted on his Instagram that he accidentally met Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi on Sunday at the 2013 Formula 1 Singapore Grand Prix.
Thaksin Shinawatra (back to camera) meets Aung San Suu Kyi at the 2013 Formula 1 Singapore Grand Prix. (Photo from Instagram @thaksinlive)
DASSK : ကျမ ဖေဖေက စစ်သားကနေ နိုင်ငံရေးသမားကို ကူးပြောင်းခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး၊
လွတ်လပ်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ နိုင်ငံရေးသမားဘ၀ကနေ
စစ်သားဘ၀ကို ကူးပြောင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအခြေအနေ နှစ်ရပ်က အလွန်ခြားနားပါတယ်။
ကျမ အမြင်အရလည်း စစ်သားဟာ နိုင်ငံရေးသမားဘ၀ကို မကူးပြောင်းသင့်ဘူးလို့ ထင်တယ် (ရယ်လျက်) စစ်ကြီးပြီးလို့ နိုင်ငံရေးပြန်လုပ်ဖို့ အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာ ကျမ ဖေဖေအတွက် . စစ်တပ်ထဲမှာပဲ ဆက်နေမလား၊ စစ်တပ်က ထွက်မလားဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ချရမယ့် အချိန်ရောက်လာတယ်.. Continue reading “Thaksin bumps into Suu Kyi at the 2013 Formula 1 Singapore Grand Prix.တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါလား ကိုသက်ဆင်ရယ်” →
MYANMAR :မိကျောင်းကန်ဆန္ဒပြပွဲကိုလက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့ ဗီဒီယို ရိုက်ခဲ့တာ။ VIDEO AUNG NAING MOE
သင်္ကန်းကျွန်း. မိကျောင်းကန်က မြေသိမ်းခံရသူတွေ ဆန္ဒပြနေကြတယ်။ လူတွေအတော်များတယ်။ သူတို့ရဲ့ Civil Disobedience နည်းလမ်းနဲ့ မတရားမှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်၊ ကိုယ့်အခွင့်အရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကို ထောက်ခံအားပေးခဲ့တယ်။